Daawo Sawirada:- Ciidamada DANAB & kuwii Dhawaan gadoodka sameeyay oo Al Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah | Arrimaha Bulshada
Home News Daawo Sawirada:- Ciidamada DANAB & kuwii Dhawaan gadoodka sameeyay oo Al Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah
Daawo Sawirada:- Ciidamada DANAB & kuwii Dhawaan gadoodka sameeyay oo Al Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah
Tuesday, March 26, 2019 News
Bulsha:- Ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada DANAB ayaa Al Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Ciidamada DANAB ayaa la wareegay tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada Tooratoorow, kadib markii ay weerar ka qaadeen saldhiga ciidamada cirka ee Balidoogle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ciidamada ayaa qabsaday deegaanada Godale , Cadaleey iyo deegaano dhowr ah waxaana la sheegay inay ciidamada ku hubeysnaayeen hub casri ah.
Sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Al Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha DHexe, halkaasi oo maalmo kahor qabsadeen ciidamada Al Shabaab.
Ciidamada xooga dalka ee kusugan Shabeelaha Dhexe, ayaa sidoo kale dib u qabsaday deegaano kale oo ka tirsan degmada Balcad, waxaana la sheegay in ciidamadii dhawaan gadoodka sameeyay inay qeyb ka ahaayeen ciidamada dib u qabsaday deegaanada AL SHabaab ku sugnaayeen.
Saraakiisha ciidamada Dowladda ee gobolada Shabeelaha Hoose iyo Dhexe ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalada Al Shabaab ay kaga saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin.